Guddomiyaha gobolka bari oo ka hadlay amaanka iyo dabagal lagu hayo dadkii dilay dr.axmad xaaji c/raxmaan. | Generic Only
Guddomiyaha gobolka bari oo ka hadlay amaanka iyo dabagal lagu hayo dadkii dilay dr.axmad xaaji c/raxmaan.
Boosaaso:(SIC):- Gudomiyaha Gobolka Bari C/samad Maxamed Galan ayaa ka hadlay amaanka Gobolka Bari iyo qaraxyo maalmihii udanbeeyay ka dhacay magalada Boosaaso.
Gudomiyaha ayaa sheegay in amaanka Gobolka wanaagsanyahay marka laga reebo fidnawadayaal mararka qaar dhacdooyin amaanka qalqalgalinaya sameeya waxaana uu sheegay in hawlgalo balaaran fuliyeen dadbadana ay xabsiga dhigeen.
C/samad ayaa sheegay in lamaha amaanka wadaan baaritaano iyo hawlgalo amaanka lagu xoojinayo waxaana uu cadeeyay in dadban oo danbiyo kala duwan loo haysto ay soo qabteen baaritaanana lagu hayo.
Mamulka ayaa kulamo laqaatay mamulada xafadaha shacabka iyo warfidiyeenada Gobolka waxaana dhamaantood ay isku raaceen in dhinackastaa adkaynta amaanka halka kaga aadan oo ka soo baxo waxaana mamulka uu warfidiyeenada ka codsaday in ay kala shaqeeyaan adkaynta amaanka.
Gudomiyaha ayaa lawaydiiyay wax kajira in gacanta lagu hayo dad looga shakisanyahay in ay fuliyeen ama soo maleegeen dilkii Dr.Axmad Xaaji C/raxmaan ayaa sheegay in baaris socoto meelwanaagsana maray.
“Ka hordhicimayo Dawlada ayaa gacanta ku haysa tuhumo iyo dad laqabtay waa jiraan lkn xiligeeda ayaa daaha kaqaadaynaa shacabka iyo saxafadana u soo bandhigaynaa ayuu hadalkiisa ku soo koobay C/samada Maxamed Galan.